Topnews:-Shaqsiyaadka ugu muuqa weyn golaha Wasiirada cusub
12 May 2013 Waagacusub.com-Xafiisyada Madaxweyne Garguurte iyo Ra''isulwasare Saacid ayaa markii ugu horeeysay laga xaqiijiyay qaar ka mida golaha Wasiirada cusub ee la qorsheeynayo in la shaaciyo marka Madaxweynaha ku laabto Muqdisho.
Golaha Wasiirada cusub waxaa ka mida Yusuf Garaad Omar oo loo qorsheeyay in loo magacaabo Wasiirka Arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka hasse yeeshee lama oga inuu aqbali doono maadama uu leeyahay han hogaan Qaran heer Madaxweyne.
Yusuf Garaad waa aqoonyahan ku hadla Luqado badan ,wuxuuna inta badan si adag uga hadlaa Siyaasadda Somalia.
Saleebaan Xaglatoosiye oo kulan qarsoodiya kula yeeshay London Madaxweyne Garguurte ayaa lagu wadaa in loo magacaabo Wasiirka Kheyraadka Badda iyo Dekadaha Dowladda Federalka Somalia.
Xil magacaabista Xaglatoosiye wali la iskuma afgaran maxaa yeelay Madaxweynaha wuxuu qabaa in Xaglatoosiye xilka la siiyo si loogu xumeeyo Cali Khaliif Galeydh halka Ra''isulwasarahana uu taas ku sifeeyay mid dhalin karto xiisad horleh,wuxuuna Saacid ku dhegan yahay in Cabdi Kariim Jamac laga dhigo Wasiir.
Madaxweyne Hassan wuxuu Waagacusub u xaqiijiyay in Siyaasi u dhashay beesha Dhulbahante la qorsheeyay in Wasiir laga dhigo si tabashadooda loo xaliyo.wuxuu sidoo kale tibaaxay in tirada golaha Wasiirada la balaariyay.
Wasiirka Cadaalada iyo Garsoorka ayaa loo qorsheeyay in loo magacaabo Gudoomiyaha Maamulka KMG ah ee Kismaayo Mr Ahmed Madoobe hasse yeeshee lama hubo inuu xilkaas aqbali doono,waxaase la hubaa in seefta xilka qaadista dulsaaran tahay Wasiirka Warfaafinta Mr Ciilmooge.
Hogaamiyaha kooxda Raaskambooni Mr Ahmed Madoobe kulankii maamul dhisida Jubaland ee Kismayo waa ka baaqsaday laba jeer,waxayna taasi dhalisay shaki fara badan iyo guux laga dareemayo ergada ka qeybgaleyso shirweynaha.
Wasiirada cusub ee ku jira safka hore waxaa ka mida nin magaciisa lagu sheegay Sadiiq Eenow iyo Siyaasiga Mustaf Dhuxulow hasse yeeshee lama oga meesha loo magacaabi doono iyo xilalka loo qorsheeyay.
Wasiiro u badan Damu Jadiid sida Wasiirka Arrimaha gudaha iyo amniga Mr Abdikariim Dhegajuun ayey seefta xilka qaadista dulsaaran tahay,waxayna tani ka dhalatay Cadaadis beesha Caalamka saartay Madaxweyne Hassan ,taas oo looga gol leeyahay in la bedelo sawirka Dowlada ee muuqaalka Damu Jadiid.
Abdikariim Dhegajuun kama fogaan doono Madaxtooyadda sida la rumeeysan yahay.
Xafiiska Raísulwasaraha hoowlwadeeno ka tirsan ayaa Waagacusub u sheegay in Wasiirada Arrimaha dibadda Fawsiya Xaaji Adam lagu bedelayo siyaasiga weyn ee Prof Ismail Hurre Buubaa hasse yeeshee wax dheeriya lagama helin dhinaca Xafiiska Madaxweynaha.
Prof Buubaa wuxuu degan yahay Muqdisho .
Fawsiya Xaaji Adam waxaa qaati ka jooga hoowlwadeenada Wasaarada arrimaha dibadda iyo Ra''isulwasaraha maxaa yeelay waa qof shaqsiyad ahaan kaligii talisa,qabyaaladuna ku badan tahay.
Dhamaan shaqaalaha Wasaaradda arrimaha dibadda waxay qortay dad u dhashay jufadeeda hoose ee Isxaaq habaryoonis gaar ahaan raaska ay ka dhalatay ee QAASIM.